musha United Kingdom Tyson Fury Yevacheche Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Isu tinopa Nyaya Yakazara yeBritish nyanzvi yetsiva Legend anozivikanwa zvakanyanya nezita remadunhurirwa “Mambo wechiGypsy".
Yedu vhezheni yeTyson Fury's Biography Chokwadi uye Childhood Nyaya inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paMazuva ake ekutanga kusvika zvino.
Tyson Fury Yehucheche Nyaya - Iyo Ongororo kusvika zvino.
Yedu Tyson Fury Biography ongororo inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu mukurumbira uye kusimuka kune mukurumbira nyaya.
Zvikuru saka, tinokuudza chokwadi nezvemukadzi wake, Hupenyu hwepamwe, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvidiki zvisingazivikanwe chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndeimwe yevavarwi vakanaka kwazvo mune chikamu chesimbi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveTyson Fury's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Tyson Fury Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure.
Kutanga kubva, Tyson Luke Hasha akaberekwa musi we 12th waNyamavhuvhu 1988 kuWythenshawe, muManchester, England.
The Legendary British Boxer aive mukuru pavana vaviri vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake vadiki vanozivikanwa nababa vake, John Fury Sr. Tarisai, mumwe wevabereki vaTyson Fury - Baba vake.
Tyson Fury baba vaJohn.
Nyika yeBritish neIreland yerudzi rwevachena vane midzi yeEuropean vakazvarwa mwedzi mitatu nguva isati yakwana uye vairema 1lb chete panguva yekuzvarwa.
Muchokwadi, mikana yeVacheche Fury yekupona yaive mashoma. Zvisinei, kutenda kusingazununguki kwevabereki vake uye nemushonga wakanaka zvakamuona achinyora kukura zvine hutano kudzamara afungidzirwa kunge akura kuti aburitswe kubva pakiriniki.
Tichifunga nezve kupona kwake kunoshamisa, vabereki vaFury vakamutumidza "Tyson" mushure memutambo wetsiva wetsiva, Mike Tyson uye vakamurera mumusha weStyal, muWilmslow, England kwaakakurira pamwe nemunun'una wake Tommy.
Wechidiki Fury akatumidzwa zita rekuti Tyson mushure meaimbove shasha isingabvumidzwe, Mike Tyson.
Kukura mumusha weStyal, zvaive zvisingaite kuti vechidiki Fury vafuratire tsiva. Baba vake, John Fury Sr aive panguva iyoyo aive nyanzvi yebhokisi uyo aigara achienda naye kumitambo yekurovedza.
Hazvina kutora nguva refu John asati aisa magurovhosi pane wechidiki Fury uye akacherekedza tarenda reiye mudiki wemutambo.
Tyson Fury Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Fury akadzidziswa pachikoro chisina kutaurwa mumusha weStyal, padyo neWilmslow, England. Paaive pachikoro ichi, the boxing prodigy akadzidza mabhesiki ekuverenga nekunyora asati amira kuenda kuchikoro aine makore gumi nemana 10.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Fury haana kusiya chikoro nekuda kwekudheerera uye nedzvinyiriro yedzidzo.
Mukomana ane makore 10 okukura akabva asiya chikoro mushure mekunge atanga kuita zvetsiva zvakamuita kuti aone kuti aida nguva yakawanda yekudzidziswa kuti aite basa rekuita zvemutambo uyu uye agobudirira mauri.
Tyson Fury akasiya chikoro paakanga akura 10 kuitira kuti awedzere basa mumutambo wetsiva.
Tyson Fury Yekutanga Basa Rehupenyu Hupenyu:
Nhoroondo yeFury yekutanga basa mubhokisi misi yakadzoka kune yekutanga ma2000s paakamiririra vese England neIreland mumakwikwi akasiyana seanokurumidza uye anodisisa amateur boxer.
Zviitiko zvake zvakakosha panguva iyi zvinosanganisira kuhwina menduru yebronze paAIBA Vechidiki Mabhokisi eWorld Boxing Championship anoitirwa mu2006. Uye zvakare, Fury yakakunda EU Junior Championship inomiririra England mu2007.
Tyson Fury arikuita seamateur boxer.
Tyson Fury Bio - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Pamusoro pebasa rake reAmateur mutambi wetsiva, Fury akatsvaga kumiririra Great Britain ku2008 Beijing Olimpiki asi akarambidzwa mukana uyu nekuti nyika imwe neimwe yairambidzwa kuisa mumunda mumwe chete mutambi wehuremu uye neBritain haina kupambadza kusarudza David David uyo aive nhengo yechirongwa chake cheAmateur Olimpiki.
Achienderera mberi, Fury akatendeukira kuIreland ku "tikiti rekukodzera" reOlympic asi akaodzwa mwoyo zvakare.
Akangowana nyaradzo shoma kubva mukuhwina zita re2008 ABA super-heavyweight uye akatendeuka hunyanzvi gore rimwe chetero.
2008 raive gore rakaomera Tyson asi kuhwina iyo ABA super-heavyweight zita kuisa kunyemwerera pachiso chake.
Tyson Fury Biography Chokwadi - Simuka Mukurumbira Nhau:
Hasha akaita yake nyanzvi yekutanga mukukunda kuhwina kurwisa Hungwe yekuHondo Bela Gyongyosi muna Zvita 2008. Achiita kunge asina kudzikisirwa, akaenderera mberi nekutora chinyorwa chinoshamisa che24-0.
Akasimuka kuita mukurumbira pakurwa kwake kwemakumi maviri neshanu nekukunda Wladimir Klitschko panguva yemutambo wepasirese weheavyweight muna Chikunguru 25.
Nekukunda uku, Fury akave WBA (Super), IBF, WBO, IBO, Lineal uye The Ring heavyweight mazita Champion.
Tyson Fury akakunda Wladimir Klitschko kuhwina iyo WBA (Super), IBF, WBO, uye IBO mazita muna 2015.
Nekukurumidza kumberi kwaChikunguru 2019, Fury anogara pamusoro pemutambo wake wetsiva nekukunda kwake kwazvino kuve kugogodza kweGerman mutambi wetsiva Tom Schwarz munharaunda yechipiri yehondo inonakidza yakaitirwa kuLas Vegas musi wa15 Chikumi 2019.
Kurwa kwakauya mwedzi mishoma mushure mekunge Fury anyora dhirowa mumutambo wake naDeontay Wilder muna Zvita 1st 2018. Nekudaro, iye ane rekodhi ye28-0-1 panguva yekunyora.
Tyson Fury akakunda Tom Schwarz kuunza rake rehunyanzvi tsiva rekodhi kusvika 28-0-1.
Tyson Fury Hukama Hupenyu Hupenyu Chokwadi:
Tyson Fury akaroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve nhoroondo yake yekufambidzana uye hupenyu hwewanano.
Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, Fury haazivikanwe kuve aine chero musikana asati asangana nemukadzi wake, Paris Fury.
Paris naTyson vakasangana kumuchato weshamwari yavo yemuchato apo aimbove achiri kuyaruka. Vakafambidzana kwekanguva vasati varoora mu2009.
Fury nemukadzi wake Paris vakaroora kubvira 2009.
Kubatanidzwa kwavo kwese kwerudo kwakakomborerwa nevanakomana ve4 uye mwanasikana we1 panguva yekunyora. Ivo vanosanganisira Prince John James, Venezuela, Prince Tyson Fury II, Valencia Amber uye Prince Adonis Amaziah.
Fury naParis vane vana vashanu panguva yekunyora.
Tyson Fury Hupenyu Hwemhuri:
Tyson Fury anobva kumhuri yepakati yemhuri. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaTyson Fury:
John Fury Sr ndibaba vaTyson. Iye anoda tsiva uye akatanga semunhu asina-knuckle murwi pamwe neasina mvumo mutambi wetsiva asati atendeuka nyanzvi.
Aizivikanwa nekukunda WBO World Champion Henry Akinwande muma '80s, Fury akazvitora pamusoro pake kuzivisa vanakomana vake kumutambo wetsiva uye anoramba achivayambira kusvika zvino.
Tyson Fury nababa vake John.
Nezve amai vaTyson Fury:
Amai vaFury ndoimwe inoshuvira kurarama hupenyu hwakavanzika. Semhedzisiro, zvishoma zvinozivikanwa nezvake kupfuura chokwadi chekuti akaberekerwa muBelfast, Northern Ireland. Kunyange zvakadaro, iye anokoshesa vana vake uye anogarisana navo.
About the Tyson Fury's siblings:
Munun'una waFury ndiTommy. Iye zvakare mutambi wetsiva uye akahwina mitambo yake miviri yekutanga panguva yekunyora.
Kunze kwaTommy, Fury ane vanun'una vaviri vakaberekwa nababa vake kubva kune imwe hukama. Ivo vanozivikanwa saJohn Jr naShane Fury.
Tyson Fury Mudiki Mukoma Tommy (Kuruboshwe).
Nezve hama dzaTyson Fury:
Kure kubva kumhuri yepedyo yaFury, zvishoma zvinozivikanwa nezvesekuru nasekuru vake pamwe nasekuru nasekuru vake.
Ane babamunini vanozivikanwa saPeter Fury pamwe nehama dzehama; Hughie Fury, Hosea Burton naAndy Lee. Iko hakuna zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini vaFury nevanin'ina vake apo mainini vake vasati vazivikanwa muzviitiko zvinozivikanwa zvehupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino.
Tyson Fury Hupenyu Hwega:
Chii chinoita kuti Tyson Fury idare ..?
Gara kumashure sezvatinokuunzira maki ehunhu hwake kuti akubatsire kuwana mufananidzo wakazara wake. Kutanga, Fury's Persona isanganiswa ye Leo Zodiac maitiro.
Iye, ane rudo, anodikitira, akasimba, ane simba uye akazaruka kuzarura ruzivo pamusoro pehupenyu hwake hwega uye hwakavanzika. Zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kudzidzira kumitambo yekuimba, kuimba, kuona mafirimu pamwe nekushandisa nguva neshamwari dzake uye nemhuri.
Tyson Fury anofunga kushandisa nguva nemhuri semumwe weaanofarira.
Taura nezve kudanana kwaFury uye kuimba kwekutandarira, iwo akasarudzika maficha ehunhu hwake hwaanoratidza kumhuri yake uye vateveri pane chero mukana wakapihwa saJune 2019 paakatanga kuimba -
'Ini Handidi Kupotsa Chinhu'-, serenading mukadzi wake, Paris, uye MGM Grand Arena boka mushure mekukunda kwake Tom Schwarz. CB inotora pazasi peiyo nguva iyo mambo wechiGypsy akaita kududzirwa kweAerosmith's 'Ini Handidi Kupotsa Chinhu' nekuda kwekunakidzwa kwako kwekutarisa.
Tyson Fury Mararamiro:
Tyson Fury ine mutengo unofungidzirwa unodarika we £ 30m panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwake kunobva mukuedza kwake kwetsiva uye terevhizheni kuita kana ongororo yemashandisirwo emari yake ichiratidza kuti anorarama hupenyu hwepamoyo.
Hapana anoshaya mukana wekuratidzira hupfumi hwake, Tyson anogara nemhuri yake mune imwe imba yakatarisa Morecambe Bay uye zvinonzi akashandisa £ 500k pakuiwedzera.
Iye zvakare ane inoshamisa Marbella mansion inotaridzika zvakanyanya kunge diki nhare. Kunyangwe Hasha dzisina kugovana chero imwe pikicha nezve imba, yakave yakakosheswa kuve isiri pasi pe £ 6m.
Tyson Fury's isinganzwisisike imba yeMarbella.
The Verace akapfeka boxer anoratidzawo rake rakasarudzika uye anodhura kuravira ari nemabhiza nekuve nemotokari kuunganidzwa kunosanganisira roller uye Ferraris.
Tyson Fury achiratidza yake Roller mota.
Tyson Fury Isina Chokwadi Chokwadi:
Kuputira Tyson Fury Yedu nyaya yeukomana uye biography pano pane zvishoma kana zvishoma zvinozivikanwa chokwadi zvisati zvakanyatsoiswa mu bio yake.
Hasha haina kunge yaonekwa achiputa asi iye anopiwa kunwa uye akambovhurwa kuti ashandise zvinodhaka mu2016.
Iye anorema boxer haana kana ma tattoo panguva yekunyora asi anotenda vateveri vanowana tattoo yeiye.
Tyson Fury achimira pamwe ne fan akawana tattoo yake.
Mu2018, Tyson akaedza kuzviuraya nekutyaira Ferrari yake pa190mph akananga kune bhiriji. Uku Fury paakanga arimo, akafungazve uye akazotsvaga rubatsiro rwehunyanzvi kuti amubatsire kurapa kushungurudzika.
Pamusoro pechinamato chake, Fury akaberekwa uye akabhapatidzwa Katurike. Achiri kutenda iko pamwe nemukadzi wake nevana uye akamboonekwa akapfeka sutu yakakura yekunamatira.
Tyson Fury muIrish Katurike.
Akave akabatikana mukuyedza uye anoshanda saMumiriri weMental health charity - Iyo Frank Bruno Foundation - panguva yekunyora.
Tyson Fury Biography Vhidhiyo Pfupiso:
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Tyson Fury Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Ndomuda rudo Tyson Fury nemukadzi wake akanaka nevana.
Ini ndinotevera Tyson ndakabatana nemapoka mazhinji uye ndakafara ku
kubvunzwa kana ndichida kuva admin zvechokwadi ndakagamuchira
Ini ndinogovana naye akawanda mafoto iye nemhuri yake vanogara kwenguva refu King Tyson Fury.